Rag loo heysto Weerarkii Westgate oo la xukumay - Awdinle Online
Rag loo heysto Weerarkii Westgate oo la xukumay
Maxkamad ku taalla dalka Kenya gaar ahaan magaalda Nairobi ayaa laba nin oo loo heysto in ay ka dambeeyeen weerarkii Westgate Mall xukunay ka dib maalmo ay socotoy dhageysiga dacwadooda.
Waxaa lagu kala xukumay 33 iyo 18 sano oo xarig ah kaalintii ay ku lahaayeen weerarkii sanadkii 2013-kii ee lagu qaaday Westgate Mall ee magaalada Nairobi, kaasi oo ay ku dhinteen 67 qof magaalada Nairobi.
Ragga la xukumay ayaa kala ah Maxamed Axmed Cabdi iyo Xusseen Xassan Mustafa ayaa loo haystaa in ay gacan siinayeen Al-Shabab.
Maxamed Axmed Cabdi waxaa lagu xukumay 15 sano oo xabsi dheeri ah ka dib markii lagu helay dambi ah in uu haystay agab caawiyay Al-Shabaab.
Labadan nin oo muddo toddobo sano ah ku qaatay xabsi ayuu Andayi sheegay in sanadahaas laga jari doono xukunnadooda.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay Dhul Gariir ka dhacay Turkiga
Next articleXubno ka kala tirsan Xukuumadda RW Rooble & mucaaradka oo gaaray Kenya